Nepal Dayari | नेपालीको जीवन बचाउन चीनले रातारात पठायो यतिधेरै अक्सिजन सिलिन्डर, नेपाललाई लगायो चीनले ठुलो गुण !
नेपालीको जीवन बचाउन चीनले रातारात पठायो यतिधेरै अक्सिजन सिलिन्डर, नेपाललाई लगायो चीनले ठुलो गुण !
जेठ २, २०७८ आइतबार १९८ पटक हेरिएको
यो पनि पढ्नुस्: एक दमदार आवाजका धनी हुन् कर्णराज गिरी । भ्वाईस अफ नेपाल-३ को ब्लाईन्ड अडिसनमा प्रमोद खरेलको ‘म बाचेकै तिमिलाई माया लाउन हो’ गीत गायर सबै कोचको मन जित्न सफल भएपछी उनको चर्चा चुलियो ।
दर्शक तथा स्रोताले पनि यति उनको आवाज निकै रुचाए । खासमा संगीत सिक्न गाउबाट काठमाडौं आएका उनी एक ट्याक्सी ड्राईभर हुन् । गाउँबाट भर्खर काठमाडौं आएका उनलाई दैनिकी टार्न गार्हो भएपछी लाईसेन्स निकालेर ट्याक्सी चलाउन थालेका थिए । त्यसपछी उनले समय मिलाएर राती ट्याक्सी चलाउने र दिउँसो पढ्ने गर्न थाले ।
दिउँसो पढ्ने र राती ट्याक्सी चलाउने उनले राती ट्याक्सी चलाउदा निकै गार्हो हुने अनुभव सुनाए । कतिपय ब्यक्तिले त ट्याक्सीमा गाएको सुनेर टिप्स पनि दिने गर्थे । कतिले त गन्तब्यमा पुगेपछी भाडा ल्याईदिन्छु भनेर हराउँथे । यसो गर्दा उनलाई निकै पीडा महशुस हुन्थ्यो । कहिलेकाही त साहुलाई ट्याक्सीको भाडा तिर्न पनि मुस्किल हुने बताए । उनका बुबा पनि निकै नाचगान गर्ने ब्यक्ती थिए । तर सानै उमेरमा बुबालाई गुमाउनुपरेको थियो ।
बुबा बितेपछी आमाले दुख गरेर हुर्काए, पढाए त्यसपछि उनलाई गाएक बन्ने ईच्छा जाग्यो । अनि काठमाडौं हानिए । उनी सानै देखि गीत गाउने गरेको र स्कुलमा सरहरुले पनि निकै तारिफ गर्ने गरेको बताए । उनको आमा अस्पतालमा थिइन् । भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अबस्था आयो । त्यही समयमा उनको ब्लाईन्ड अडिसनको तयारी चलिरहेको थियो ।
सुरुमात उनलाई आमा यस्तो अबस्थामा रहदा कसरी गीत गाउन सक्छु जस्तो बनायो तर यहि क्षेत्रमा भएको मिहिनेत र गायक बनेको हेर्ने आमाको ईच्छाका कारण ब्लाईन्ड अडिसनमा गए । र उत्कृष्ट प्रस्तुति पनि दिए । कोचहरुको वाहिवाही पाए । कोच राजुले त ‘तपाईको आवाजमा सरस्वतीको बाँस छ, यो आवाजलाई सधै जोगाईराख्नु’ भनेका थिए । यस्तै कोच दिपले त प्रमोद खरेलको भन्दा राम्रो गाएको भन्दै तारिफ गरेका थिए ।
उनले कोचहरुको यो कमेन्टले आफुलाई निकै उर्जा दिएको अनुभव सुनाए । कर्णले ब्लाईन्डमा कोच तृष्णालाई छानेर टिम तृष्णामा गएका थिए । आमा अस्पतालमा नै थिईन । तर छोरोले ठूलो स्टेजमा गीत गाएको हेर्ने चाहना थियो । कर्णराजले मोबाईलमा आफ्नो भिडियो लगेर देखाए ।
आमा रोईन, अनि वरिपरि बसेका सबैलाई आफ्नो छोरालाई सबैले माया गरिदिन, सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिन । यस्तो अनुरोध सुनेर कर्णराजको आँखा रसायो । उनले भने ‘आफू मृत्युसंग लडीरहदा पनि आफुलाई बचाईदेउ भन्नुको सट्टा’ छोराको लागि सोचेको देखेर मेरो आँखा रसायो। सायद आमाबाबुको माया भनेको यहि रहेछ ।
आमा बिरामी रहेपनी साहस, हिम्मत र सपना बोकेर उनी भ्वाईस अफ नेपालमा कम्पिटिसन गरिरहेका छन् । अहिले उनी नकआउट राउन्डमा प्रबेश गरिसकेका छन् ।
ब्लाईण्ड अडिसनमा ‘थाहा छैन तिमिलाई कति माया गर्छु’ गीत गाएर ब्याटल राउन्डमा पुगेकी समिरा थपलिया र ‘म बाचेकै तिमिलाई माया लाउन हो’ गीत गाएर ब्याटलमा पुगेका कर्णराज गिरीको प्रस्तुती दमदार बन्यो ।
उनिहरुले ‘आज हाम्रो भेटभाको दिन’ गीत गाएका थिए । भिडियो हेर्नुस्